Budata My Mini Mart Apk maka gam akporo [Egwuregwu] - Luso Gamer
Nbudata My Mini Mart maka gam akporo [Egwuregwu]
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ onye ọrụ ugbo mana họrọ ọrụ na-ezighi ezi. Nwee ike ịrụ ọtụtụ ọrụ mana enweghị ike ijikwa ọrụ ahụ. Ugbu a na-egwu My Mini Mart Apk ga-eme ka ndị na-egwu egwuregwu nwee obi ụtọ gbakwunyere na-arụ ọrụ nke onye ọrụ ugbo.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwa egwuregwu ndị ọzọ yiri ya nwere ike iru ebe ahụ. Nke na-enye ọrụ ndị a n'ịntanetị n'efu. Mana mgbe a bịara na nnweta na ndakọrịta ngwaọrụ. Mgbe ahụ, anyị chọpụtara na ọtụtụ n'ime ochie smartphone bụ erughị eru.
Otú ọ dị taa, anyị wetara ọhụrụ a Egwuregwu 2D ngwa. Nke bụ free ibudata na achọghị ndenye aha ma ọ bụ ndebanye aha. Ọzọkwa, Egwuregwu My Mini Mart na-arụ ọrụ naanị na ekwentị gam akporo gam akporo na nke ochie.
Kedu ihe bụ My Mini Mart Apk
My Mini Mart Apk bụ ngwa egwuregwu ịntanetị nke Supersonic Studios LTD haziri. N'ụzọ bụ isi, a chọrọ ndị egwuregwu ka ha rụọ ọrụ nke onye ọrụ ugbo. Onye na-achọkarị ịbụ onye ọrụ ugbo na ndụ n'ezie wee nweta nnukwu ọchịchọ n'ahịa.
Egwuregwu na-amalite na mmadụ. Onye na-arụsi ọrụ ike n'ezie ịkọ nri organic na ihe mmiri ara ehi ndị ọzọ dị mkpa. Nke na-achọsi ike n'ahịa mana iji tolite na-agba ọsọ ọtụtụ ọrụ chọrọ ọrụ siri ike.
Agbanyeghị na mmalite ndị egwuregwu nwere ike ịnwe nsogbu ijikwa ọrụ. Mana ndị egwuregwu kwesịrị ịrụsi ọrụ ike na mbido. N'ihi na ọnọdụ ego adịghị mma. Ozugbo ha nwere ike ịkpata ezigbo ego na-ere ngwaahịa.
Mgbe ahụ, usoro ahụ ga-ekwe ka ndị na-egwu egwuregwu were ọrụ ndị ọzọ. Ịrụ ọrụ nwere ike ibelata ọkwa nrụgide yana ịbawanye mmepụta. Yabụ ị kwenyere na ị nwere ike ịbụ ezigbo onye ọrụ ugbo wee nweta nka iji jikwaa arụmọrụ wee wụnye My Mini Mart Download.
aha Obere Mart m
Mmepụta Personlọ nyocha Supersonic LTD
Aha ngwugwu com.KisekiGames.smart
Category Egwuregwu - Action
N'ebe ahụ, ọtụtụ ngwa egwuregwu ndị ọzọ dị na ntanetị. Nke na-ewu ewu ma na-ewu ewu n'etiti ndị hụrụ egwuregwu n'anya. Mana a bịa n'ịnweta na ntozu, ọtụtụ n'ime ndị na-akwado ya nwere ike ọ gaghị enwe ike ị nweta egwuregwu ndị ahụ.
N'ihi na igwu egwuregwu ndị dị otú ahụ chọrọ ndenye aha dị oke ọnụ. Enweghị itinye ego, ndị egwuregwu enweghị ike ịkwado ọnọdụ ha n'etiti ndị egwuregwu ndị ọzọ. Ọzọkwa igwu egwu egwuregwu dị arọ dị otú ahụ chọrọ smartphones dijitalụ kacha ọhụrụ.
Ndị mere ochie na smartphones nwere ike ịnwe nsogbu ịwụnye egwuregwu ndị dị otú ahụ. Ọbụna ndị na-eme nke ọma n'ịwụnye egwuregwu ndị dị otú ahụ. Enwere ike mechaa nwee nsogbu dị ka kpo oku, kpọgidere, lag na nsogbu ndị ọzọ.
Ya mere na-atụle nsogbu na egwuregwu nkasi obi. Ndị mmepe na-eme nke ọma n'ịhazi ngwa egwuregwu a dị egwu nke enwere ike ibudata. Na dakọtara na ma ọhụrụ na nke ochie smartphones.
Iji mee ka egwuregwu ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ. A na-agbakwunye ọtụtụ ụgwọ ọrụ n'ime egwuregwu egwuregwu, a ga-enwetakwa ya iji nweta mgbe i lechara mgbasa ozi. N'ihi ya, ị nwere mmasị na njikere igwu egwu na ndị enyi wee budata My Mini Mart Android.
Ọ dị mfe igwu egwu na ịwụnye.
Ịwụnye egwuregwu ahụ na-enye ọrụ ugbo n'ịntanetị zuru oke.
Ebe a na-arịọ onye ọrụ ugbo ka ọ na-akụ nri organic.
Chicken ugbo, anụmanụ na mkpụrụ osisi ndị ọzọ.
E mesịa ree ngwaahịa ahụ n'ahịa wee nweta ego.
A na-eji ego enwetara kwalite ihe ndị ọzọ.
Otu esi ebudata My Mini Mart Apk
Enwere ike ịnweta ngwa egwuregwu ugbu a site na Ụlọ Ahịa Play. Mana n'ihi ụfọdụ mgbochi isi yana njirisi ntozu siri ike. Ọtụtụ ndị egwuregwu enweghị ike ibudata egwuregwu ahụ ozugbo. Yabụ na ọnọdụ dị otú ahụ, anyị na-akwado ndị egwuregwu ka ha gaa na webụsaịtị anyị.
N'ihi na ebe a na webụsaịtị anyị, anyị na-enye naanị ezigbo faịlụ Apk mbụ. Iji jide n'aka na nchekwa onye ọrụ, anyị na-etinye Apk n'elu ngwaọrụ dị iche iche. Maka nbudata ụdị ngwa egwuregwu emelitere biko pịa njikọ enyere.
Anyị ji n'aka na nbudata na ịwụnye ngwa egwuregwu enweghị nchebe. Ọbụna tupu ịnye ya n'ime ngalaba nbudata, anyị etinyelarị Apk n'elu ekwentị dị iche iche. Mgbe anyị jikọtara ngwa egwuregwu, anyị enweghị ike ịhụ nsogbu ọ bụla siri ike n'ime.
Ebe a na webụsaịtị anyị anyị ekekọrịtala ọtụtụ ngwa egwuregwu ndị ọzọ. Nke yiri ya na playable na niile Android smartphones. Iji kporie ndụ egwuregwu ndị ọzọ biko tinye ngwa ndị a. Ndị ahụ bụ YoYa Busy Life World Apk na Emojimix Apk.
N'ihi ya, ị na-arọ nrọ mgbe niile ịbụ onye ọrụ ugbo mana ị nweghị ike igbu ya na ndụ n'ezie n'ihi usoro ọrụ n'aka. Mana ugbu a ndị egwuregwu nwere ike ime ka nrọ ha mezuo site na nbudata My Mini Mart Apk. Kedu nke enwere ike ịnweta site na ebe a na otu pịa nhọrọ.
Categories Action, Egwuregwu Tags Egwuregwu 2D, My Mini Mart Android, My Mini Mart Apk, Nbudata Obere Mart m, Egwuregwu Obere Mart m Mail igodo
Nbudata PS4 Emulator Apk maka gam akporo [Ọhụrụ 2022]
HFlix APK Budata 2022 Maka gam akporo [Ertugrul na Urdu]